आज एकैदिन ७४० जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या १५ हजार नाघ्यो Canada Nepal
आज एकैदिन ७४० जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या १५ हजार नाघ्यो
काठमाडौं ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा ७४० जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ । शुक्रबार आयोजित मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा ७४० जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको जानकारी दिए ।
यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक संक्रमित संख्या हो । यसअघि गत असार ४ गते एकै दिन सर्वाधिक ६७१ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो।
हालसम्म नेपालमा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या १५ हजार दुई सय ५९ पुगेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा ८२३ डिस्चार्ज भएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या ६१४३ पुगेको छ भने कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ३२ रहेको छ ।
आषाढ १९, २०७७ शुक्रवार १०:५२:०० बजे : प्रकाशित
आयुर्वेदिक टिप्स : राति भुलेर पनि नखानुहोस् यी चीज
काठमाडौँ। आयुर्वेदकाअनुसार मानिसले जहिले पनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर मात्र भोजन गर्नुपर्दछ । हरेक व्यक्तिले आफ्नो भोजनमा उचित मात्रामा गुलियो, नुनिलो, अमिलो, हल्का तितोपिरो स्वादलाई अनिवार्य रुपमा सामिल गर्नुपर्ने आयुर्वेदमा उल्लेख छ । जसले गर्दा शरीरमा पोषक तत्वको राम्रो पूर्ति हुने गर्दछ।
खासगरी, रात्रीको भोजन गर्दा केहि खानेकुरा सकभर खानु हुँदैन । आयुर्वेदले बाथ, पित्त र कफका रोगीहरुले रातको समयमा भोजन गर्दा धेरै कुरामा सावधानी अपनाउनु पर्ने सल्लाह दिएको छ। आयुर्वेदमा रातको समयमा केहि खानेकुराहरु नखान सल्लाह दिइएको छ।
राति के खानेकुराहरु खानु हुँदैन
दही : राति कहिल्यै पनि दहीको सेवन गर्नु हुँदैन। राति दहिको सेवनले छातीमा कफ जम्न तथा घ्यारघ्यार हुने गर्दछ । जसले गर्दा श्वासप्रस्वासमा समस्या उत्पन्न गराउँदछ । रातको समयमा दहिको साटो दुध सेवन गर्दा स्वास्थ्यलाई लाभदायक हुने गर्दछ।
दूध : यदि राति दूध पिउने बानी छ भने, यसलाई थोरै परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्छ। रातमा कम फ्याट वा गाईको दूध मात्र सेवन गर्नुहोस् । रातमा दुध सेवन गर्दा जहिल्यै पनि तातो दुध पिउनुहोस, तातो दुधलाई शरीरले सजिलै पचाउन सक्छ।
मसलेदार खाना : रातमा मात्र नभएर दिनमा पनि खाना बनाउँदा वा खाँदा कम मसला भएको खानेकुराहरू खानु पर्दछ। मसलाले शरीरको ताप बढाउँदछ र भोक पनि धेरै लाग्ने हुन्छ। साथै, यसले पेट पोल्नेदेखि अन्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। जहिले पनि खानामा दालचिनी, सुप, मेथी र अलैंची प्रयोग गर्नुहोस्। यसले पेटको समस्याहरूलाई टाढा राख्न मद्दत गर्दछ ।
प्रोटिनको मात्रालाई कम गर्ने : बेलुकाको खानामा प्रोटिनयुक्त खाद्य पदार्थहरूको सेवनलाई कम गर्नुहोस् । उच्च प्रोटिन भएका खाना जस्ता जस्तै दाल, हरियो सागसब्जी, माछा, मासु, फलफुल लगायतका खानाहरु कम सेवन गर्नुपर्दछ।
उच्च प्रोटिन भएका खाना पचान प्रकियामा समस्या निम्त्याउन सक्छ। यदि सेवन नै गर्नुछ भने पनि थोरै मात्रामा गर्नुहोस् ।
श्रावण २७, २०७७ मंगलवार १९:५३:१३ बजे : प्रकाशित
अफिन भन्छ : निजी अस्पतालले कोरोना संक्रमित लुकाउन सक्दैन
काठमाडौं । निजी अस्पतालहरुले कोरोनाभाइरस संक्रमित बिरामी लुकाएको भन्ने आरोपलाई निजी अस्पतालको छाता संगठन एशोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टच्यूसन अफ नेपाल (अफिन)ले खण्डन गरेको छ ।
निजी अस्पतालले कोरोनाभाइरस संक्रमित बिरामी लुकाउने गरेको भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ । लकडाउनको सुरुवाती अवस्थामा बिरामी जाँच्न आनकानी गरेको आरोप खेपेका निजीहरुले अहिले कोरोनाभाइरस संक्रमित बिरामी लुकाउने गरेको आक्षेपको सामना गरेका छन् ।
मुलुकभर कोरोनाभाइरस संक्रमण बढिरहँदा निजी अस्पतालले कोरोना संक्रमित बिरामीबारे गोप्य राखेर आफ्नो व्यवसायमा आँच आउन नदिएको आरोप लागेको हो । तर, यसलाई अस्वीकार गर्छन्, निजी अस्पतालको छाता संगठन एशोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टच्यूसन अफ नेपाल (अफिन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापाले ।
कोरोनाभाइरस संक्रमण दिनानुदिन बढिरहँदा अस्पताल र शैय्याको अभाव हुने अवस्था सृजना हुँदा निजी अस्पतालमाथि सो आरोप लागेको हो । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा नआएसम्म नेपालमा महामारी नघट्ने बताइसकेका छन् ।
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्ने निश्चित छ । कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालले मात्रै धान्दैन । यसर्थ निजी अस्पताल जिम्मेवार बन्दै आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्नु पर्नेछ भने निजी अस्पतालकाबारे अफवाह फैल्याउनु पनि उचित हुँदैन ।
मंगलबार परोपकारी प्रसुती तथा स्त्रीरोग अस्पतालको ६१ औँ बार्षिक उत्सव समारोहमा मंगलबार मन्त्री ढकालले विज्ञहरुले अहिले कोरोनाको उच्च जोखिम रहेकाले संक्रमितको दर बढ्ने बताएका छन् ।
‘साउन २५ देखि भदौ २ गतेसम्म कोरोना उच्च जोखिमको अवस्था रहेको छ। यही अवस्थामा जोखिम कायम रहिरहे ९१ हजार पोजेटिभ देखिन्छन्। र, मध्यम खालको रहेका ३९ हजार पुग्छन् भन्ने हाम्रो अनुमान हो,’ मन्त्री ढकालले भने, ‘त्यसका लागि हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ नियन्त्रण गर्न लागिपरेका छौँ।’
कोरोना संक्रमितको बढिरहँदा र अझै बढ्ने मन्त्रीको अभिव्यक्ति आइरहँदा निजी, सामुदायिक र सरकारी अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा विश्वसनीयता हुनु आवश्यक छ । कुनै पनि अस्पतालको विश्वासप्रति शंका उब्जिएमा यसले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा गम्भीर असर गर्नेछ ।
निजी अस्पतालले संक्रमित लुकाउन सक्दैन
निजी अस्पतालहरुले कोरोनाभाइरस संक्रमित लुकाउने गरेको आरोप खेपेका छन् । लकडाउनको सुरुवाती अवस्थामा सामान्य बिरामीलाई पनि स्वास्थ्य सेवा नदिएको आरोप खेपेका निजी अस्पतालमाथि अहिले कोरोनाभाइरस संक्रमित बिरामीबारे गोप्य राखेको आरोप लागेको छ ।
कोरोनाभाइरस संक्रमित देखिएमा व्यवसायमा आँच आउने भन्दै उनीहरुले बिरामी लुकाएको आरोप लागेको हो । तर, यो सम्भवन नरहेको अफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापाले क्यानडानेपाललाई जानकारी दिए । कोरोनाभाइरस पोजेटिभ देखिएमा सरकार आफैंले घोषणा गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए ।
‘निजी अस्पतालले कोरोनाभाइरस संक्रमित बिरामीलाई लुकाउन सक्दैन’, उनले भने, कोरोना परीक्षणदेखि घोषणा सबै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रालय आफैंले गर्छ । बिरामी लुकाउने भन्ने आरोप निराधार छ ।’
कोरोनाभाइरस परीक्षण भइसकेपछि यसबारे मन्त्रालयलाई अनिवार्य रुपमा जानकारी गराउनु पर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष थापाको भनाइ छ । कोरोनाभाइरस परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएमा अस्पताल आफैंले भन्न सक्ने भन्दै उनले पोजेटिभ आएमा अस्पतालले नभएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले घोषणा गर्ने गरेको छ । यो अवस्थामा निजी अस्पतालले कोरोनाभाइरस संक्रमित बिरामी लुकायो भन्नु सरासर गलत हो उनको भनाइ छ ।
अफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष थापाको भनाइमा स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि सहमत छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले पनि निजी अस्पतालले कोरोनाभाइरस संक्रमित बिरामी लुकाउन नसक्ने बताए । ‘निजी अस्पतालले कोरोनाभाइरस संक्रमित बिरामी लुकाउन सक्दैन’, उनले क्यानडानेपालसँग भने, ‘निजी अस्पतालले संक्रमित बिरामी लुकाएको अहिलेसम्म कुनै घटना फेला परेको छैन ।’
श्रावण २७, २०७७ मंगलवार १२:५२:०३ बजे : प्रकाशित
अब हरेक अस्पतालले कोरोना बिरामीका लागि २० प्रतिशत बेड छुट्याउन पर्ने
काठमाडौं । देशभरका अस्पतालले अब कोरोना बिरामीका लागि २० प्रतिशत बेड छुट्याउन पर्नेछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्देशन दिँदै देशभर रहेका सम्पूर्ण अस्पतालले आफुसँग जति क्षमता छ त्यसको २० प्रतिशत कोरोना बिरामीका लागि बेड छुट्याउन भनेकाे छ ।
मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता प्रा.डा जागेश्वर गौतमले देशभर रहेका सबै निजी, सामुदायिक र सरकारी अस्पतालहरुले कोरोना उपचारको लागि २० प्रतिशत बेड छुट्याएर सरकारलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएका हुन्।
श्रावण २७, २०७७ मंगलवार ११:२०:०७ बजे : प्रकाशित
# बेड छुट्याउन पर्ने
पानीको बोतलमा थुप्रै ब्याक्टेरियाहरु हुन्छन्, यसरि राख्नुहोस् आफ्नो बोतललाई सफा
काठमाडौँ। गर्मीको मौसम होस् वा जाडोको समय पानीका बोतलहरू सबै घर घरमा पाइन्छ। प्रत्येक दिन पानी पिउन हिजो आज मानिसहरु विभिन्न प्रकारका बोतलहरू प्रयोग गर्छन्। तर, यसको सफाईमा भने उचित ध्यान दिएको पाइदैन जसका कारण यस्ता बोतलहरुमा विभिन्न किसिममा ब्याक्टेरिया फस्टाउन थाल्छन्। पानीको बोतलहरुलाई समय समय सफा नगर्नाले यसबाट नराम्रो गन्ध आउँने गर्छ। त्यसैगरी, यस्ता फोहोर बोतलहरुमा पानी पिउँदा विभिन्न किसिमका समस्या निम्तिन सक्छन्। सामान्यतया बोतलहरूमा रहेको पानी पिउँदा पेटमा समस्या आउनुका साथै स्वास्थ्यमा अन्य समस्याहरू देखिन सक्छ।
कस्तो बोतललाई कसरी सफा गर्ने ?
शिशाको बोतल:शिशाको बोतल सफा गर्न जहिले पनि मनतातो पानीको प्रयोग गर्नु निकै फाइदाजनक हुन्छ । यसैगरी, बोतललाई राम्ररी सफा गर्न डिश वाशका केही थोपाहरूपनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। डिश वाशले मजाले धोएपछि यसलाई मनतातो पानीले पल्खानुहोस्।
स्टेनलेस स्टीलको बोतल: चिसो वातावरणमा ब्याक्टेरियाहरु द्रुत रूपमा बढ्ने गर्दछन। यस्ता किसिमका बोतलमा पनि कीटाणुहरू लुकेका हुन्छन्। यस्ता बोतल बाहिरबाट सफा देखिएपनि भित्र थुप्रै किसिममा ब्याक्टेरियाले वास गरेका हुन्छन्। यस्तो बोतललाई सफा राख्न १ चम्मच भिनेगर र डिश वाश मिश्रण गरी बोतलको बिर्को बन्द गरेर १ देखि २ घण्टा सम्म छोडदिनुहोस् र यसलाई पछि तातोपानिले धुनुहोस्।
प्लास्टिकको बोतल: प्लाष्टिक बोतलहरूमा कीटाणुहरूको अधिकतम मात्रा पाइने गरिन्छ। यस्ता बोतलहरु सजिलै र सस्तोमा बजारमा पाइने भएका कारण सबैले यस बोतलको प्रयोग गर्ने गर्छन्। प्लास्टिकको बोतल लामो समय सफा नगरी राख्दा यसबाट नराम्रो गन्ध आउन थाल्छ। त्यसैले यस्ता किसिमका बोतल प्रयोग गर्दा निकै सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। अन्यथा, यस बोतलबाट पानी पिउँदा पेटका समस्याहरु निम्तिन सक्छन्। यस बोतललाई सफा गर्न साबुन प्रयोग गर्न सकिन्छ भने यसबाट आउने गन्ध हटाउन, १-१ चम्चा बेकिङ सोडा र ब्लीच पाउडरलाई पानीमा मिलाएर बोतलमा राख्नुहोस। एक रात भरी यसलाई त्यतिकै छोडदिनुहोस र भोलिपल्ट यसलाई सफा र तातोपानीले धुनुहोस्।
श्रावण २६, २०७७ सोमवार १९:४२:१५ बजे : प्रकाशित
युरिक एसिड किन हुन्छ ? यसका लक्षण,कसरी बच्ने उपाय जानौ
काठमाडौ । पछिलो समय युरिक एसिडका बिरामी बढ्न थालेका छन् । मानिसलाई युरिक एसिड चाहिने भन्दा बढी भएमा यसले जोर्नीहरुमा समस्या ल्याउँछ र ‘गाउट’ भन्ने रोग लाग्छ । युरिक एसिडलाई एक प्रकारको बाथरोगका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । युरिक एसिड रगतमा नभई नहुने महत्वपूर्ण तत्व हो ।
शरीरभित्र पिउरिन भन्ने प्रोटिन टुक्रिएर युरिक एसिड उत्पादन हुन्छ । सामान्यतः ३ देखि ७ मिलिग्रामरडेसिलिटर सम्मको युरिक एसिड नर्मल मानिन्छ । जब युरिक एसिडको मात्रा ७ भन्दा बढी हुन्छ, त्यसलाई युरिक एसिड बढेको भनिन्छ ।
कस्ता ब्यक्तिलाई हुन्छ युरिक एसिड ?
अस्वस्थ्यकर खाने तर, शारीरिक श्रम गर्दैनन् ।
वंशानुगत रुपमा पनि दोस्रो पुस्तामा यो रोग देखापर्न सक्छ ।
जाँडरक्सी र धेरै प्रोटिनयुक्त खानेकुरा सेवन गर्नेहरु ।
रगत पातलो बनाउने औषधी, उच्च रक्तचापको औषधी सेवन गरिरहेकाहरु ।लक्षण
पर्याप्त पानी वा झोलयुक्त खानेकुरा सेवन गर्ने, जसले बढी भन्दा बढी युरिक एसिड पिसाबको माध्यामबाट बाहिर निस्कन्छ ।
खानपानमा सतर्कता अपनाउनु पर्छ । खासगरी प्रोटिनयुक्त खानेकुरा सेवन गर्नु हुँदैन ।
रातो मासु, कलेजो, रक्सी, गेडागुडी जस्ता खानेकुराले युरिक एसिडको जोखिम बढाउँछ ।
हरेक दिन खाने भोजनमा कम्तीमा ५ सय ग्राम भिटामिन(सि जरुर लिनुहोस् ।
नियमित व्यायाम गर्नुपर्छ । स्वथ्य खानपान र जीवनशैली अपनाउनुपर्छ ।
विभिन्न अध्ययनले शरीरमा यूरिक एसिडको मात्रा बढी हुनुका कारण फरक–फरक देखाएका छन् । पहिलो हो युरिक एसिड सामान्य भन्दा बढी शरीरमा उत्पादन हुनु । दोस्रो, मृगौलाबाट पिसाब भएर शरीरबाट निस्कनु पर्ने मात्रामा कमी हुनु र फलस्वरुप रगतमा युरिक एसिडको स्तर उच्च हुनु ।तेस्रो, मिश्रित कारण भनेको भोजनमा युरिक एसिड बन्ने कुरोको औधी सेवन गर्नु, रक्सीको सेवन धेरै गर्नु, लामो समयसम्म भोको बस्नु हो |
श्रावण २६, २०७७ सोमवार १६:१०:४३ बजे : प्रकाशित
# युरिक एसिड
कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने यी हुन् १० राष्ट्र
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अहिलेसम्म विश्वभर साढे सात लाख मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको भाइरस विश्वका दुई सय १५ देशमा फैलिसकेको छ ।
तर चीन भने धेरै मानवीय क्षति रोक्न सफल भएको छ । झन्डै ८५ हजार संक्रमित भए पनि मृतकको संख्या पाँच हजार पनि पुगेको छैन । कोरोनाले सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति भएको मुलुक अमेरिका बनेको छ । विश्वकै शक्तिशाली देश अमेरिकामा सोमबारसम्म एक लाख ६५ हजार मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । दोस्रोमा ब्राजिल रहेको छ । ब्राजिलमा एक लाखभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ ।
अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै ज्यान गुमाउने देशमध्ये तेस्रो स्थानमा मेक्सिको छ । उसलाई चाँडै भारतले पछि पार्ने सम्भावना छ । किनभने भारतमा कोरोना संक्रमणको दर तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ । यहाँ धेरै ज्यान गुमाउने १० देशको तथ्यांक उल्लेख गरिएको छ ।
अमेरिका – एक लाख ६५ हजार
ब्राजिल – एक लाख चार सय १७
मेक्सिको – ५१ हजार तीन सय ११
बेलायत – ४७ हजार पाँच सय ६६
भारत – ४३ हजार चार सय ५३
इटाली – ३५ हजार दुई सय तीन
फ्रान्स – ३० हजार तीन सय २४
स्पेन – २८ हजार पाँच सय तीन
पेरू – २० हजार ६ सय ४९
इरान – १८ हजार दुई सय ६४
श्रावण २६, २०७७ सोमवार १०:५३:३९ बजे : प्रकाशित